Abenzi beengxowa zokunyusa kunye nababoneleli - China iingxowa zokunyuselwa kweengxowa
Le bhegi yokuthwala yenziwe nge-polyester eyi-600D, ehlala ihleli kwaye izakukhusela izinto zakho zikwimeko entle. Umthamo umalunga ne-12L, inokubamba ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Imibala emininzi yokukhetha kwakho. Ijongeka njengolutsha. Umphambili wangaphambili wezinto ezincinci. Kukulungele ukuba ukhuphe izinto. Unyaka ngamnye, sinikezela malunga neepateni ezingama-50-100 ezintsha kubo bonke abathengi behlabathi. Uyilo ngentando nayo yamkelekile. W ...
Le bhegi yokuthwala yenziwe nge-polyester eyi-600D, ehlala ihleli kwaye izakukhusela izinto zakho zikwimeko entle. Umthamo umalunga ne-11L, inokubamba ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Imibala emininzi yokukhetha kwakho. Ijongeka njengolutsha. Ipokotho enemingxuma kunye nepokotho yangaphambili kwezinye izinto ezincinci. Kukulungele ukuba ukhuphe izinto. Unyaka ngamnye, sinikezela malunga neepateni ezingama-50-100 ezintsha kubo bonke abathengi behlabathi. Uyilo ngentando yi ...
Le bhegi yokuthwala yenziwe nge-polyester eyi-600D, ehlala ihleli kwaye izakukhusela izinto zakho zikwimeko entle. Umthamo umalunga ne-13L, inokubamba ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Imibala emininzi yokukhetha kwakho. Ijongeka njengolutsha. Mesh pocket for ezinye izinto ezincinci. Kukulungele ukuba ukhuphe izinto. Unyaka ngamnye, sinikezela malunga neepateni ezingama-50-100 ezintsha kubo bonke abathengi behlabathi. Uyilo ngentando nayo yamkelekile. Si ...
Ukukhuthaza ibhegi yelaptop enemibala emininzi
Ibhegi yeLaptop engenamanzi yenziwe nge-polyester eyi-600D, ehlala ixesha elide kwaye iya kuzikhusela izinto zakho zikwimeko entle kwanaxa kunemvula. Umthamo umalunga ne-11L, inokubamba ilaptop eyi-14 intshi, ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Ukulungiswa kwamaphepha okubopha igxalaba kunokunciphisa ukudinwa kwamagxa kukwenza ukhululeke. Imibala emininzi yokukhetha kwakho. Ijongeka njengolutsha. Ipokotho enemingxuma kunye nepokotho yangaphambili kwezinye izinto ezincinci. Kuyadlula ...
Ukukhuthazwa kobhaka wesipho sombala ngemibala emininzi
Ukunyuswa kobhaka wesipho wenziwe nge-polyester eyi-600D, ehlala iqinile kwaye iya kuzikhusela izinto zakho zikwimeko entle nangemini yemvula. Umthamo umalunga ne-15L, inokubamba ilaptop eyi-14 intshi, ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Umtya othambileyo wale bhegi unokunciphisa ukudinwa kwamagxa kukwenza ukhululeke. Imibala emininzi yokukhetha kwakho. Ijongeka njengolutsha. Ephothiweyo amanzi ibhotile kunye uziphu ngaphambili epokothweni f ...
Ukunyusa ibhegi epholileyo yeebhotile ezimbini
Le bhegi yonyuselo epholileyo yeebhotile zewayini ezi-2, ezinye iziselo okanye ukutya. Izinto zangaphandle yi-600D / 300D ipholiyesta ene-PVC edibeneyo ehlala ixesha elide. Umboniso unokuba yi-PEVA emhlophe, i-PEVA engwevu okanye ifoyile yesilivere ekhuselekileyo kunxibelelwano lokutya kunye nokucoca ngokulula ngelaphu elimanzi. Ilogo yakho inokuprintwa kwipokotho yangaphambili. Sihlala sisebenzisa i-3mm foam EPE eshinyeneyo phakathi kwangaphandle kunye nelining ukugcina ukufudumala okanye ukubanda. Ewe ungasebenzisa ejiyileyo. Qho ngonyaka, siya kubonelela malunga 50-100 iipateni ezintsha kulo lonke w ...
Le bhegi yokuthwala yenziwe nge-polyester eyi-600D, ehlala ihleli kwaye izakukhusela izinto zakho zikwimeko entle. Umthamo umalunga ne-11L, inokubamba ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Imibala emininzi yokukhetha kwakho. Ijongeka njengolutsha. Zip ipokotho ngaphambili kwezinye izinto ezincinci. Kukulungele ukuba ukhuphe izinto. Unyaka ngamnye, sinikezela malunga neepateni ezingama-50-100 ezintsha kubo bonke abathengi behlabathi. Uyilo Elungiselelweyo nayo wel ...
Ingxowa yomyalezo enemibala emininzi yokwazisa
Ingxowa yeMiyalezo engenaManzi yenziwe nge-polyester eyi-600D, ehlala ixesha elide kwaye iya kuzikhusela izinto zakho zikwimeko entle nangemini yemvula. Umthamo umalunga ne-13L, inokubamba ilaptop eyi-14 intshi, ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Ukulungiswa kwamaphepha okubopha igxalaba kunokunciphisa ukudinwa kwamagxa kukwenza ukhululeke. Imibala emininzi yokukhetha kwakho. Ijongeka njengolutsha. Mesh pocket for ezinye izinto ezincinci. Kukulungele ...
ubhaka wokwazisa onemibala emininzi
Ubhaka wokunyusa wenziwe nge-polyester eyi-600D, eqinile kwaye iya kuzikhusela izinto zakho zikwimeko entle kwanaxa kunemvula. Umthamo umalunga ne-15L, inokubamba ilaptop eyi-14 intshi, ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Umtya othambileyo wale bhegi unokunciphisa ukudinwa kwamagxa kukwenza ukhululeke. Imibala emininzi yokukhetha kwakho. Ijongeka njengolutsha. Pocket mesh for bottle bottle and zipper front pocket for some s ...
Ukunyusa i-6 inokwenza ibhegi epholileyo ngombala oqinileyo
Le bhegi yokunyusa ipholile yenzelwe i-6. Izinto zangaphandle yi-600D / 300D ipholiyesta ene-PVC edibeneyo ehlala ixesha elide. Umboniso unokuba yi-PEVA emhlophe, i-PEVA engwevu okanye ifoyile yesilivere ekhuselekileyo kunxibelelwano lokutya kunye nokucoca ngokulula ngelaphu elimanzi. Ilogo yakho inokuprintwa kwipokotho yangaphambili. Sihlala sisebenzisa i-3mm foam EPE eshinyeneyo phakathi kwangaphandle kunye nelining ukugcina ukufudumala okanye ukubanda. Ewe ungasebenzisa ejiyileyo. Unyaka ngamnye, sinikezela malunga neepateni ezingama-50-100 ezintsha kubo bonke abathengi behlabathi. Elungiselelweyo desig ...
I-Bag ye-Messenger engenamanzi yenziwe nge-600D okanye i-420D ye-jacquard ipholiyesta enenkxaso ye-PVC engenamanzi, ehlala iqinile kwaye iya kuzikhusela izinto zakho zikwimeko entle kwanakumhla wemvula. Izinto eziphathekayo zi-Eco-friendly eziza kuhambelana nomgangatho we-EU kunye ne-USA. Umthamo umalunga ne-13L, inokubamba ilaptop eyi-14 intshi, ezinye iincwadi, isipaji, iselfowuni, umboneleli wamandla, iiglasi kunye nokunye ukusebenza, ngaphandle, ishishini kunye nokuzonwabisa. Adapter Adjustable igxalaba umtya kunokunciphisa ukudinwa egxalabeni kukwenza com ...
Ubhaka wesitshixo sophawu lokwazisa kunye nemibala emininzi
Ezi zingxowa zitsalayo: Kukho imitya emi-2 kwicala ngalinye nakwikona ezisezantsi eziqinisiwe nge-PP yilena. Kukho imitya emibini kwicala ngalinye. Ungarhuqa umtya ukuvala ibhegi, emva koko inokuba yingxowa yobhaka. Zoba Umtya weBhola yeBhola: i-42cm ubude kunye ne-35cm ububanzi, ilungele ukugcina iincwadi, iiteki, iimpahla, amashwamshwam, zonke iintlobo zemfuno zemihla ngemihla. Imibala eyahlukeneyo, elungele iimeko ezahlukeneyo, ezinjengamaqela, inkampu, ukuthenga, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba intaba nokuhamba kwemihla ngemihla. Nokuba ungumntwana, umdala okanye ...